Samsung enyelarị aka ịkwụsị bọtịnụ raara nye Bixby | Akụkọ akụrụngwa
Otu n'ime atụmatụ ndị kemgbe mmalite ya nyere ọtụtụ ndị ọrụ Samsung Galaxy S8 nsogbu, ma ugbu a, Nkọwa 8, bụ button raara nye Samsung nnyemaaka akpọ Bixby, onye nnyemaaka nke na-ebibu naanị n'asụsụ Korean ma dịkwa na Bekee kemgbe ọnwa ole na ole.
Ruo ugbu a, ọ nweghị ụzọ ịkwụsị bọtịnụ raara onwe ya nye, ya mere ọtụtụ ndị ọrụ bụ ha na-emecha megharịa ya. Ọ dabara na ọ ga-ekwe omume na ndị Korea nke Samsung mechara nye anyị ohere iji gbanyụọ bọtịnụ a, na-ahapụ onye enyemaka Bixby ịkwụsị inye ha nsogbu mgbe anyị mere ya.
Agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ ekwuputeghị atụmatụ ọ bụla iji dochie ojiji ejiri bọtịnụ ahụ, anyị nwere olile anya na ụmụ okorobịa nọ na Samsung gbanwere uche ha na mgbe ọ kara aka ka mma, nke mere na ndị ọrụ S8 na Note 8 nwere ike hazie bọtịnụ ahụ ka ihe atụ mepee igwefoto ozugbo na-enweghị ịbanye ngwaọrụ menu. Ebumnuche Samsung dị mma mana enweghị Bixby na asụsụ ndị ọzọ yana nnweta Google Assistant na gam akporo, anaghị agba ndị ọrụ ume ka ha chọọ ịgbanwe onye enyemaka.
Nhọrọ a ịkwụsị bọtịnụ raara onwe ya nye na melite ụdị, mmelite nke ga-abata n'adabereghị na mba ebe Samsung Galaxy S8 dị ugbu a na Nkọwa 8 dị nso. N'oge a anyị amaghị mgbe mmelite ahụ ga-amalite, mana ozugbo ọ dị na Spain , anyị ga-agwa gị ozugbo ka ị nwee ike ịkwụsị bọtịnụ enyemaka Bixby ngwa ngwa. Mgbe anyị na-eche Samsung ka anyị kwe ka anyị jiri ya maka ebumnuche ndị ọzọ, ọ bụ ezie na nke a agaghị enwe ike ime ebe ọ bụ na ọ gaghịzi enwe isi ịnye bọtịnụ maka onye enyemaka nke nwere ike ịgbanwe ọrụ ya iji daba ndị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung ama ohere deactivating button raara nye Bixby